Xaqiiqooyinka Cudurka Jadeecada (Measles) - Daryeel Magazine
Xaqiiqooyinka Cudurka Jadeecada (Measles)
Jadeecadu (Measles) waxa ay ka mid tahay cudurada ugu badan ee ubadkeena haleela iyada oo ka mid ah cudurada sida dhibta yar la isku qaadsiiyo inta badana khubarada caafimaadku waalidka ka codsadaan in laga tallaalo marka ay ku dhacdana goobaha caafimaadka si dedgeg ah loo geeyo.
Dhallaanka da’adoodu kayartahay 1 sanno (kahor inta aanan laga tallaalin cudurka jadeecada).
Majirto daawo xadidan oo loogu talo galay jadeecada. Nasasho iyo in baddan oo cabbitaan dareere ah ayaa lagula talinayaa qofka qabba cudurka jadeecada. Maadaama feyraska sababo jadeeco, daawada antibiyootikada ahi ma ahan mid faa’iido ama waxtar leh.
Dawo Faaido Wayn U Leh Dadka Qaba Cudurka Macaanka Oo Lasoo Saaray DARAASAD: Buurnidu Waxay Hoos U Dhigtaa Khatarta Cudurka Dementia Beedka Oo La Ogaaday Inuu Ragga Ka Ilaaliyo Cudurka Macaanka Ka Hortaga Cudurka Macaanka